nje kwi-intanethi ndibano - IVIDIYO INCOKO zwelonke! Onke amazwe, iinqwelo, lonke ihlabathi.
nje kwi-intanethi ndibano
Mhlawumbi sibe nje bafuna ukufumana ukwazi thina
Inkcazelo iinkonzo kwaye inkqubo kuba ukufumana unxibelelwano free Kunokuba free unxibelelwano ngu ezahlukeneyo kwi counselling. Ngokungafaniyo counseling, le nkonzo ifumaneka akukho stipulate kwelinye icala umyalelo, umzekelo, isombulula abanye psychological iingxaki njengoko abanye babuza end nesiphumo, apho kufuneka sibe kuzaKwi-advising incoko izikhokelo i-psychologist kwaye free unxibelelwano wena kuphela Kuwe chaza isihloko kwaye yobomi incoko. Kwi -"free unxibelelwano"ufumane hayi, umhlobo, kodwa interlocutor ngubani versed kuyo imiba psychology kwaye philosophy. Ingaba sekhe wayecinga malunga oko bekuya kuba mnandi ukuba akwazi ukubaleka ngaphandle (umz."- imeyili"okanye"- ICQ") kunye u-a psychologist okanye kwa philosopher, nje ukuba incoko.
Ngaphandle striving ukusombulula ingxaki okanye personal mba kwaye nje uthethe. Ngamanye amaxesha, kukho nje azanelanga sensible interlocutor, lowo izakuba attentive ukuba amazwi ethu, kwaye ayikwazi kufumana kubalulekile (kwaye hayi kwinqanaba"mthubi cinezela") ukugcina incoko ke. Emva zonke, incoko, kubonisa kwi dialogue ngu inye indlela yokuphepha ukususela incessant turnover ka-abasebenzi kwaye nkqu usapho everyday. I-ngokwamalungelo thetha kwaye epistolary genre, ukuba pushed ukuza kuthi ga ngoku, ukuba periphery le imeko-bume.
Kwi-umbindi yaba jumble umsebenzi olunxulumene ulwazi kwaye fragmentary, rhoqo ngokupheleleyo engenanto chatter. Isithuba kuba kubalulekile dialogue, kuba kubonisa kwaye ingxowa-entsha enye (nkqu ukuba kuphela kuba ngokwakho okanye yakho.) impendulo na umbuzo uthi phantse bemkile. Kodwa kukho abaninzi kangaka umdla kwaye remarkable, ukuze sibe unakekele kwaye ungathanda ukuba uhlale kancinci ixesha elide kule, ukuqonda. Kwi-psychological mimiselo, nibe nokufunyanwa anomdla ukuziphatha kwe umntu, inkcazo apho siya ungathanda ukufumana. Sinako surprise eyakho jikeleziso ukuba isiganeko okanye iintshukumo abanye abantu, babo meanings kwaye amaxabiso. Ingqwalasela yethu unako ukutsala lo msebenzi ka-perception okanye amava. ngoko ke ngubani owaziyo yintoni enye into. Kwaye oku personal ulwazi, oku"ithetha ngokwayo"unako zange buyisela akukho yokubhalwa inyaniso. Nayiphi na abancinane into enako apha isizathu eyakho discoveries, babo personal ukuqonda, gaining intsingiselo yayo. Kodwa philosophical mimiselo, yi-kwaye enkulu, musa nkqu care kukho isihloko kuba incoko okanye hayi. Ukuba amacala asingawo indifferent yabo imeko, abantu, kwihlabathi jikelele kwaye ukuqonda ezinye ajongene, umxholo ngokwayo ngu bamisela ekuhambeni ye-incoko.
Kunjalo, ukuba abathathi-nxaxheba kuvumela incoko ukuba iitshati yayo kunjalo kwaye hayi interfere kunye nalo.
Apha, icace phandle, sasivuya uthetha malunga."
Ngoko ekhutshwe kwaye phantsi kwaye sifunyenwe kakhulu ezibalulekileyo intsingiselo. Ngoko ke, ukuba umlingane Wakho uyayazi ukuba yintoni celani, kwaye okubaluleke kakhulu, unako nive into phakathi kwemigca, phakathi amazwi, iileta. kwaye psychologist kwaye philosopher idla kuphela oku uxakekile. Ngexesha abanye incopho, experiencing a uhlobo elithetha, kunye abantu banako exclaim,"Oh. Ezinjalo moments ka-yokwazisa ingaba kakhulu exabisekileyo aye abonisa indlela kwinqanaba elitsha ukuqonda, enew inqanaba ukuqonda, mbono izimvo zabo malunga ihlabathi, malunga ubomi, malunga nantoni na. Kwaye oku elithetha akuthethi ukuba bobabini abazange bazi ntoni waba uthetha malunga, kodwa babengenako qinisekisa ukuba"into"- the new isicwangciso, apho ngesiquphe ivulekile kwaye bamfumana intsingiselo kwaba kokukhona kubalulekile kwe-amaxesha amaninzi uluvo lwam. Zonke mna propose unengxaki ukukhetha phakathi zimbini iindlela zonxibelelwano Ngokwembalelwano nge-e-mail okanye usebenzisa i-intanethi umyalezo wesiquphe ("i-Imeyili apha: unxibelelwano"). i-intanethi ukuncokola nge-Intanethi sithunywa (inkqubo kuba imiyalezo ekhawulezayo ICQ, M-Iarhente, - Skype, njalo-njalo. indlela"Incoko"). Njani ukuze ukwazi zithungelana. Kuqala ukuba ukhethe uhlobo unxibelelwano (ukusuka psychological okanye philosophical bias), indlela unxibelelwano (messaging okanye incoko), ukuhlawula iseshoni chatting kwaye ukufumana ukuba idilesi ye email yakho bam-imeyili ngokunjalo nabo kuba unxibelelwano kwi convenient lwenkqubo im (ekhawulezileyo ke abathunywa: ICQ, M-Iarhente, - Skype) Olandelayo, ukuba Ngaba ekhethiweyo i -"- imeyili apha: unxibelelwano", ngoko ke nje ukubhala kwam incwadi waza wathunyelwa (ibhokisi yangaphakathi okanye ngomhla na ke abathunywa). Ukuba ukhetha indlela"incoko"- intanethi, ke mna kukhankanywe - nabo kwi-oluzenzekelayo yokubhala (apho ufumana emva intlawulo) cacisa wayenqwenela zithungelana"ixesha amathuba okuphumla"(Moscow ixesha) kwaye"imihla"kuba ethambileyo unxibelelwano kwi-intanethi. Ndiya ukunxibelelana Nawe ngokwam nge-imeyili okanye nge-sithunywa msinyane kangangoko ndinako. Kwaye zithungelana. Ngexesha elinye, nto khusela kuthi ukuba zidibane"yokubhala"kunye"incoko", nantoni na. Noko ke, qaphela ukuba umahluko"- imeyili apha: unxibelelwano"kwi -"incoko"kubalulekile obligatory"kwi-intanethi"kuba zombini kubo. Oko kukuthi, Wena mna ngexesha elinye kwimali-Intanethi kwaye zithungelana kwi-real-ixesha. Kucacile ukuba"incoko"ngakumbi convenient ukuba umntu ngubani owaziyo njani uhlobo ngokukhawuleza kwaye ziqulunqe ngengcinga. Nangona kunjalo, kuba abantu abaninzi abakhoyo sele usebenzisa i-intanethi sithunywa ngu-hayi kunzima. Mna ngokwam kusasa ukuchwetheza ngokukhawuleza (owakhe touch uhlobo loshicilelo indlela blindly), kodwa hurry awuyi ukuba kuba unxibelelwano kwi hurry. Ngamnye unxibelelwano iseshoni uhlawulwa kwangaphambili okanye siyenza kwangoko ngokwesivumelwano kwi uthotho enjalo iiseshoni prepaid (kunjalo, njengoko unqwenela). Nangona kunjalo, mna sinelungelo walile ukuqhubeka unxibelelwano, kodwa qiniseka ukuba zichaza isizathu kwaye kunjalo refund yonke imali yakho ukuba Kufuneka ihlawulwe ngaphambi kwexesha, kuba ithuba zithungelana kwixesha elizayo. Ukuba unayo akukho iinkqubo kuba im (Internet sithunywa), ngoko ke bona ngezantsi.
Friendship Yi Ezinzima affair Kunye attractions Ezifana
Datum in San Francisco: Ich war Glücklich auf Einer Dating-Website.
omdala Dating ngaphandle ubhaliso ividiyo ukufumana acquainted kunye umntu esisicwangciso-mibuzo roulette kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso free ividiyo-intanethi incoko Dating ukuhlangabezana abafazi omdala Dating zephondo dating site kuba ezinzima ividiyo incoko kunye guys umfanekiso Dating erotic ividiyo incoko kuba couples